Ahlusunna Oo AMISOM ku Eedeeysay ka Qeyb Qaadashada Dagaalka Guriceel - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Ahlusunna Oo AMISOM ku Eedeeysay ka Qeyb Qaadashada Dagaalka Guriceel
Hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca ayaa ka hadlay dagaalka degmada Guriceel ay kula galeen Ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo dhinac ah, kaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac tiro badan ah.
Qoraal kasoo baxay hoggaanka Ahlusunna ayaa waxaa lagu sheegay in ay soo dhaweeynayaan baaqii nabadda ahaa ee kasoo baxay qaar kamid ah Midowga Musharixiinta iyo baaqyaa nabadeed oo ay soo saarayaan waxgaradka, Siyaasiyiinta & Culimadda.
Sidoo kale Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxaa ay sheegeen in ay aqoonsan yihiin jiritaanka Maamulka Galmudug iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay, balse ay ka xun yihiin wixii ka dhacay Guriceel.
“ASW Waxay kaxuntahay in Ciidamada nabad ilaalinta AMISOM qayb-ka-noqdaan burburinta isbitaalada iyo goobaha gargaarka oo ay dawladda federalka Somaliya kawado degmada Guriceel iyagoo u gudbinaya hub shurci daro ah oo dhaliyaya barakac iyo burbur hantiyeed sidookalana ka horjeeda xuquuqda aadamaha iyo shaqada AMISOM dalka u joogto ayaa lagu yiri” Qoraalka hoggaanka Ahlusunna.
Ugu danbayn Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxaa ay ugu baaqeen Beesha Caalamka iyo hayadaha Gargaarka in ey xalada bani’aadanimo ee ka tagan degmada Guriceel deg deg uga jawabaan.
Warkan kasoo baxay hogganka Ahlusunna Waljaamaca ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Saddex Malin oo xiriir ah degmada Guriceel ay ku dagaalameen Ciidanka dowladda & kuwa Galmudug oo dhinac ah iyo hoggaanka Ahlusunna, kaas oo ay ku dhinteen saraakiil & Askar farabadan.
Previous articleRooble Oo Amar Dul-dhigay Hay’adaha Amniga.
Next articleMaxkamadda Gobolka Banaadir Oo Xukun ku Riday Rag Ajnabi ah